Adopt Me – Petunity
Zee Kwat, Ta Yote Kyi & Bao Bao
Adopt Me Xx ကြောင်လေး ၃ ကောင်နဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ ခု မေလ ၂၈ မှာ အသက် ၄လ ပြည့်မယ့် ကြောင်ပေါက်လေး ဇီးကွက်နဲ့ တရုတ်ကြီး၊ ကြောင်မေမေ Bao Bao (ကောက်ရတာဖြစ်ပြီး အသက်မသိပါ) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ ဇီးကွက်နဲ့ တရုတ်ကြီးတို့က လက်ရှိ...
Aki, Yu Ki & Shi Shi
Adopt Me Xx အသက် ၅ လအရွယ် ကြောင်မလေး ၃ ကောင်နဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ အခီ၊ ယုခီ နဲ့ ရှိရှိ ပါ။ ရန်ကုန်က ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ လက်ရှိ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ သန် ပုံမှန်ချပေးပါတယ်။ ပုံမှန် သန်ချပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာပြီး အာဟာရပြည့်ဝစွာနေထိုင်နိုင်ရန်...
Liker, Sugar & Jet Li
Adopt Me Xx Adopt Meတယ်ရီယာနဲ့ စပန်နီရယ်စပ်တဲ့ ခွေးလေး ၃ ကောင်နဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ Liker၊ Sugar နဲ့ Jet li ပါ။Sugar က ခွေးအမလေး ပါ။ Sugar နဲ့ Jet Li တို့က အသက် ၅ နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီ။Liker ကတော့ အသက်...
Adopt Me Xx ဖိုးလုံး လို့နာမည်ခေါ်တဲ့ အိမ်ကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်မယ့် မျိုးစပ်ခွေးလေးနဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ အသက် ၁ နှစ်ထဲမှာပါ။ ရန်ကုန်ကပါ။ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ ကျန်းမာပါတယ်။ ပုံမှန် သန်ချပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာပြီး အာဟာရပြည့်ဝစွာနေထိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဖိုးလုံးက သူစိမ်းဆိုရင် စွာတတ်ပေမယ့် အချိန်ခဏယူလိုက်ရင် လူကိုအရမ်းခင်တွယ်တတ်ပါတယ်။ အိမ်မှာ ခွေးမွေးထားတာမရှိပဲ ခြံရှိတဲ့ အိမ်ဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။...
Milo, American Lab
Adopt Me Xx Milo လို့နာမည်ခေါ်တဲ့ American Lab လေးနဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ အသက် ၄ နှစ်ထဲမှာပါ။ ရန်ကုန်ကပါ။ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ ကျန်းမာပါတယ်။ ပုံမှန် သန်ချပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်း၊ ကျန်းမာပြီး အာဟာရပြည့်ဝစွာနေထိုင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Milo က လူကိုအရမ်းခင်တွယ်တာမို့ သူ့နားအမြဲ ရှိပေးရင်...
Adopt Me Xx Milo လေးနဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ အသက် ၂ နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ရန်ကုန်ကပါ။ ကျန်းမာရေး ရာဇဝင်။ ကျန်းမာပါတယ်။ ပုံမှန် သန်ချပေး၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ မျိုးနွယ်။ Spaniel ကာကွယ်ဆေး။ ကာကွယ်ဆေး update ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဆက်မပွားနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာ။ ထမင်းနဲ့ကြက်သားပြုတ်နယ်ကျွေးပါတယ်။ကြက်ဥလဲကြိုက်ပါတယ်။...
Polly, Molly & Dolly
Adopt Me Xx ခွေးပေါက်လေး ၃ ကောင်နဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ မီးမီး ၃ ကောင်ပါ။ သူတို့မှာ နာမည် မရှိသေးပါဘူး။ ပက်ယူနတီက ခေတ္တပေးထားတဲ့ code နာမည်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ (နောက်မှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ နာမည် ပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။) မီးမီးနာမည်တွေကတော့ Polly, Molly နဲ့ Dolly တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ...
Adopt Me Xx ခွေးပေါက်လေး ၇ ကောင်နဲ့ အားလုံးကို မိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်။ သားသားက ၅ ကောင်ပါ။ မီးမီးက ၂ ကောင်ပါ။ သူတို့မှာ နာမည် မရှိသေးပါဘူး။ ပက်ယူနတီက ခေတ္တပေးထားတဲ့ code နာမည်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ မီးမီးတွေကတော့ Wonder Woman နဲ့ Black Widow ပါ။...